GALMEE TAAJJABBII KOOTIRRAA.—Deebisaa Tarreessaa’tiin – Beekan Guluma Erena
GALMEE TAAJJABBII KOOTIRRAA.—Deebisaa Tarreessaa’tiin	Beekan Guluma Erena
Education, Poems May 14, 2016May 14, 2016OROMO
63SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
GALMEE TAAJJABBII KOOTIRRAA.
Barreeffamni koo kuni sirriitti isinitti dheerata yoo ta’e bira darbaatii ‘post’ suuraa Istaayilii bareedaan ka’e jala dhaqaatii ‘like’ fi ‘comment’ irratti roobsaa! Anii fi barreeffamni koo hangasitti asuma teenyee waldubbisnaatii. Dhaabbatni ‘fb’ irraa bananne kuni mirga amma yaada namaa hin xuqinitti ibsachuu nuuf kennee jira. Qeequu fi ergaa barumsa kennu dabarfachuuf mirga guutuu qabna. ‘Account’ koo kana jecha darbii isaa ana qofaatu qaba, keessanis akkasi. Karaa fuula kanaa yaadan qabu ibsadhee dhageessisuuf dirqama Prof,Dr, Gaazexeessaa, Taatoo fiilmiwwanii, Xiinxalaa siyaasaa, barreessaa beekamaa ta’uu fi ‘Oxford University’ ykn Jaarmiyaa Addunyaatti dhaga’ama qabu keessa hojjachuun narraa hin eegamu.
Ani mul’ata namaa gadi ta’een hafa jedhu gonkumaa hin qabu. Yoo xiqqaate qixa namaa ammas ta’u bara fedhe nan jiraadha. Kuni ammoo kan milkaa’u akkuma barreessaan kitaaba MIILTOO jedhu mataa kiyya ,kan mormaa olitti argamu kana, sirriitti hojjachiisudhaani. Maarree sun dhugaa dha ittan fayyadama. Garuu yoom nama ta’uu??
Gaafa fb gubbaatti ba’anii bookkisanii?
Gaafa miidiyaa Hawaasaa kana gubbaatti hordoftoota kumaatama horatanii?
Gaafa keessumaa kabajaa ta’anii iddoo gurguddaatti affeeraman qofaa?
Gaafa impaayera kana keessaa alatti ba’anii afaan guuttatanii haasa’anii?
Gaafa Yuunibarsiitii biyya alaa tokkorraa sadarkaa argatanii?
Miti kun hunduu! Har’ayyuu ani nama. Namni altakkaan Hawwaa abuuree Addeessa kore jiraaree? Hin jiruum. JARAKOO AKKANUMATTI NAMA TA’U. Tattaaffiidhuma amma gochaa jirruun nama taana. Namni gadi qabamee ture akkasumatti hin hafu, guyyaan ni dhufa. Ofuma isaatif “Maaloo natti barfateera dafeen qaqqabaa” jechaa kan boo’u gammachiisuuf, kan balleesse adabuuf, kan dhugaa dhabeef barbaacha, kan hidhame hiikuuf , kan ciisu kaasuuf, kan…..f yeroo isaa eegee didichaa dhufa malee akka nama dhibaa’aa du’aaf jireenya gidduu hin jiraatu. Pa! Isaanif.
Mee Uummanni keenya akkanatti hin hafu silaa goototni keenya fb gaafas “ Moo’anneerra, kana ciminni, nuuf darbeera, boqonneerra fi……..”jedhanii barreessuuf lamatta m/b galuu qabuu? Wanta nurra ga’eef deebiin afaan banuun osoo hin taane; mataa gaddaan guutame kana bannee, humna keenya itti fixannee , biyyuma keessa teenyee yoo dalagne dhufa. Warreen sagalee gaddaa qofa nutti lallabdan kana booda achumatti nurraa dhaabbadhaa, sagaleen Abdii kutannaa galmaan nama hin geessisu. Yoo barbaaddan ”Akkana taanekaa, maaloo maaloo taane, keenya kana Uumanuu dagateera” jettanii nu hin boochisinaa mee ittuma dhiisaa! AMMAYYUU ABDIIN JIRA! Rabbi nu uumee fi Dhaloota qubee bira.
Warri mataan keessan TUFFII namaa qofaan guutee jirus of sirreessaa! Namni nama guddaa ta’uu isaa fagootti GAANFA IRRATTI ARGANII MITI kan beekan. Adeemsuma kanaan, akkanumatti guddaa ta’u. Namoonni akkuma waggaa meeqaan duraatti nama hubattanis dogoggortanii jirtu. Isiniif kan gaafas homaa hin beekne har’as akkasuma. Ana bakka durii mitii bakkan yeroo barreeffama kana caafuu eegalu jiruttuu na hin barbaadinaa! Amma namni hunduu sadarkaa dhoqqeen borcinee taphatnu bira kutnee jirra, ta’us baay’ee walcaaalla. Kuni ammoo seeruma uumati. Isin qofa miti : Oromoon, Sabboonaan, kan beekee haasa’u, kan baratu, kan barsiisu, kan fiigu, kan xiinxalu, kan qabsaa’uu, kan beekamtii qabu. Inumaayyuu kan dachaa keessan ta’an meeqatu jiru seetani. Namoonni “osoon ani hin jiraannee silaa…qabsoon hin jiru, biyyi hin guddatu, beekan hin jiru fi…” jettan osoo isin hin jiraannee silaa guddanne, silaa qabsoofne, silaa beekaa taaneyyu turre. Isintu nu rakkiseyyu. Egaa Addunyaa kanarra luka lama qabaatee kan haalan yaadu ilma namaati. Koottaamee ammayyuu walhin tuffannuu, sagalee badii walirratti hin lallabnuu. MEE MAALOO..walhaakabajnu, sadarkaa fi gahee keenya yaa beeknu, yaa tokko taanuu jechaa galmee taajjabbii koo har’aa asumaan xumura. Badiin jiraannan gamanumaa na oofkalchaa.
Asuma biyya keessan jira.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa63SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DUBBIIN DUBBII DHALA—Sabaan Bon Firrisaatiin
SHEEKKOO..WARAABESSA GOWWOOMFAME..Lammii Girmaatii’n →
Posts	Inginer Ganamoo Ibirhaam; GGO irratti maal dubbate? Maanguddoon OLC fi GGO gidduutti maal murteessan. Eenyutu dide? Qaanqee Show faana!
DIINQA OROMOO: Kutaa 1ffaa-Obbo Xaahaa Roobaafi Beekan Gulummaa Irranaa, Caamsaa 26, 2017
Politics Category (316)
CommentsForever on HIDHAA JAALALAARusty on Maqaa OromooIrene on Seenaa Abdiisabaa, Eebba Boodaa:Abdiisaan Ogeessa koompiwutaraa(IT)-Ogeessi Takinooljii kun Nuuf haabarbaadamu-Abdi Y Ayana on HIDHAA JAALALAAdawit bekele on HIDHAA JAALALAA	Recent Posts	Inginer Ganamoo Ibirhaam; GGO irratti maal dubbate? Maanguddoon OLC fi GGO gidduutti maal murteessan. Eenyutu dide? Qaanqee Show faana!